FARITRA BOENY : Tafatsangana ny vaomieram-paritra miady amin’ny kolikoly
Fampahafantarana ireo anjara andraikitr’izy ireo sy ny paikady hoentina mampihena ny kolikoly eny aminy sehatr’asam-panjakana sy ny tsy miankina no natao ny misandratr’andron’ ny zoma 09 aogositra teo tao amin’ny efitrano fivoriana Bloc administratif- Ampisikina. 13 août 2019
Sarangam-pahefana avy amin’ireo sehatr’asa voalaza tetsy ambony ireo no tonga namaly ny antso nataon’ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly na ny Bianco sampana Mahajanga tamin’io fotoana io. Araka ny toromarika nomeny tale jeneraly vaovaon’ny Bianco eto Madagasikara, dia misy ny politikam-panjakana atao laharam-pahamehana amin’ny ezaka hiaraha-manana amin’ny kolikoly. Laharana faha-152 amin’ireo firenena miisa 180 i Madagasikara amin’izao fotoana izao eo amin’ny ezaka vita amin’ny ady amin’ny kolikoly nefa efa an-taonany maro no nijoroan’ny Bianco.
« Mbola ezaka lehibe noho izany no miandry ny firenena malagasy, hoy ny talem-paritry ny Bianco, ka izany no antony nananganana ity CAC na ny Cellule Anti-corruption, na vaomieram-paritra handrafitra ny ady atao amin’ny kolikoly ity eto amintsika ». Voalohany amin’izany dia ny ady atao amin’ireo tsy matimanota, na ireo mpanararao-pahefana. Eo koa ny ady atao amin’ny fanodinkodinam-bolam-panjakana sy ny tsenam-barom-panjakana. Ary ady atao amin’ireo mpanao kolikoly eo amin’ny fampidirana ho mpiasam-panjakana, na eo amin’ny sehatr’asa ara-tsosialy io, na ara-pahasalamana, na eo amin’ny filaminana anatiny ary eo amin’ny sehatra ny fananantany, izay vaindohan-draharahan’ity tale jeneraly vaovaon’ ny Bianco ity. Mitaky andraikitra hoan’ny tsiraray anefa ny ady iombonana, fa tsy anjara andraikitry ny Bianco samirery intsony tsy toy ny efa nahazatra hatramin’izay.
« Io indrindra no antony nananganana ity rafitra CAC ity », hoy ny talem-paritry ny Bianco Mahajanga. « Ireto vondron’ olona mandrafitra ny CAC ireto indray avy eo no hanentana sy hanara-maso ireo mpiara-miasa aminy na eo amin’ny sehatra tsy miankina na eo amin’ny sampandraharaham-panjakana, izay sady hampihenana koa ny fitorohana ho tonga eny amin’ny Bianco izany », hoy hatrany ity tompon’andraikitra ity. Marihina fa velirano fahatelon’ ny Filoha Andry Rajoelina, ny ady atao amin’ny kolikoly, ka izany no niantsoan’ ny rehetra mba hifanome tanana hamongotra izany fanetriben’ ny firenena izany.
Tsy hitsitsy ny fanjakana
Nampahafantarina tamin’ireo mpizaika tonga maro tamin’ity fivoriana voalohan’ny Bianco ity ny anjara andraikitry ny Cac . Voafaritra ao anatin’ ny dimy taona mantsy ny politikam-panjakana vaovao sy ireo naoty vao nivoaka andro vitsy lasa izay amin’ity ady amin’ny kiolikoly ity. Ho fanohizana ny ezaka efa vitan’ ny teo aloha sy ny hahatrarana io politikan’ny fitondrana ankehitriny io, dia miara-mientana ny rehetra hampihena na tsy ho fongotra tanteraka aza ny kolikoly eto Boeny, hoy hatrany ireo nifandimby nandray fitenenana.
Fantatra koa izao fa efa nivoaka ny didim-panjakana mahakasika ny lalàna fanagiazana ireo harena azo avy amin’ny fanodinkodinam-bolam-pajakana sy ny tsy rariny, araka ny filankevitry ny minisitra ny 25 jolay lasa teo, izay nankatoavin’ny Filoha Andry Rajoelina. Eo koa ny lalàna vaovao ho an’izay tratra mbola minina manao kolikoly, ka ankoatra ny sazy ara-bola tsy maintsy aloan’ilay olona mpanao izany. Dia misy ny fampidirana am-ponja an’ilay olona tratra manao kolikoly sy ny fanagiazana ireo fananany, fa indrindra dia mety hiafara aminy fanesorana azy tsy ho mpiasam-panjakana mihitsy, hoy hatrany io lalàna vao nivoaka ny 25 jolay lasa teo io. Asa avy hatrany no miandry ireto vaomieran’ ny Cac ireto ato anatin’ ny distrika enina mandrafitra ny Faritra Boeny, araka ny didim-pitondrana prefektoraly teto Mahajanga, izay ivondronan’ny sehatra miankina sy tsy mainkina amin’ny fanjakana. Koa ireo anjara andraikitr’izy ireo sy ny paik’ady hoentina miady amin’ity kolikoly ity no nifanakalozana nandritra izao fivoriana voalohany natao izao. Efa nisokatra koa ny tranonkalam-pifandraisan’ny Bianco eto Boeny, ka nampahafantarina tamin’ireto vondron’olona ao aminy Cac ireto, izay azo itorohana miafina.
Marihina fa fehezan-dalàna laharana 2016/ 020, no mirakitra ny ady atao amin’ity kolikoly ity eto Madagasikara, ka ny fiaraha-mientan’ny rehetra amin’ilay fomba fijery ny Biaco ho " Tsika jiaby miaraka, mandresy ny kolikoly" no tanjona. Ny fanjakana ankehitriny dia mbola nanamafy fa tsy hitsitsy amin’ireo olona milaza tsy matimanota, ka nampihatra ny politika ny tsy azo ivalozana ny lalàna mifehy ny kolikoly, amin’ilay antsoina hoe " tolérance zero". « Tsy ekena intsony izany manomboka izao, ny famerimberenan’olona mila raharaha any amin’ireo biraom-panjakana eto amintsika. Ary raha misy vola mihodina takina amin’ireo mila raharaha ao amin’ny biraom-panjakana iray, dia tsy maintsy misy taratasy fanamarinana na quittance », hoy hatrany ny talem-paritra ny Bianco Mahajanga raha nanokatra iny fivorian’ny Cac iny tamin’io zoma 09 aogositra teo iny. Hisy ny tomban’ezaka atao ho an’ireto vaomiera ny Cac ireto aorian’izao fivoriana voalohany natao izao, mba handrefesana ny dingana vita sy ny lavitr’ezaka mbola hiandry ireto vaomiera ireto.